Rindrambaiko GIS tsotra: Mpanjifa GIS amin'ny $ 25 ary mpizara amin'ny Internet $ 100 - Geofumadas
Jolay, 2017 Featured, jeospatial - GIS, Pirinty voalohany
Androany dia miaina amin'ny sehatra mahaliana isika, izay iarahan'ny rindrambaiko malalaka sy tompony, manampy amin'ny indostria amin'ny sehatry ny fifaninanana izay mandanjalanja kokoa isan'andro. Angamba ny olana ara-jeografia dia iray amin'ireo sehatra iorenan'ny vahaolana azo avy amin'ny loharano mivaingana toy ny vahaolana fahazoan-dàlana tsy andoavam-bola; Na izany aza, miatrika ireo roa farany ireo, mipoitra ny tsena ho an'ireo izay tsy te-hiditra an-kalamanjana, fa tsy afaka mandoa ny vidin'ny tompona malaza koa. Ity dia rindrambaiko tsy lafo.
Nahasarika ny saiko hatrany ireo vahaolana ireo, satria amin'ny fomba te hahafanta-javatra dia manana akany mahaliana izy ireo. Iray amin'ireo tiako indrindra taloha ny Manifold GIS. Androany aho dia nijery ny Simple GIS Software, fampiharana iray izay manana fiasa marobe izay mahaliana ny ho fantatra sy hovaina.
Mora toy inona moa izany? GIS Software tsotra
Simple GIS Software (SGS) dia manome valin-kafatra amin'ny lafiny roa, tsy ny birao mahazatra ihany, fa ny iray miaraka ihany koa, amin'ny alàlan'ny mpizara iray izay afaka manome serivisy WMS (OGC Standard) ihany koa. Mahaliana ity farany, satria ny SGS dia manome ny fahafaha-misambotra, mitahiry, manodinkodina, mamakafaka ary koa manolotra tahirin-kevitra ara-jeografika sy ara-jeografika; manambatra ny fahaiza-manao sy ny herin'ny tahiry data mahazatra.
Ny tolo-kevitr'i SGS dia ny ho lozisialy mora ampiasaina, miaraka amin'ny làlan-kizorana fohy ary ny fahatsorana amin'ny fanaovana GIS miaraka amin'ny vahaolana izay zara raha mitentina 25 dolara. Ny ankamaroan'ny zavatra ataon'ny Simple GIS Software dia mitovy amin'ny ataon'ireo fitaovana hafa maimaimpoana sy manan-katao; angamba ny zavatra mahaliana amin'ity vahaolana ity dia ny fahaizany mampihatra, amin'ny fanaovana amin'ny fomba tsotra izay takian'ny mpampiasa indrindra, tsy misy fahasarotana amin'ny bokotra sy plugins marobe. Ny rindrambaiko GIS tsotra dia tsy mamokatra sy mampiseho sarintany fotsiny, fa manana (ary toa mora azo io) fahaiza-manao famakafakana manampy amin'ny famahana ny olan'ny tena izy mifototra amin'ny fifandraisana eo anelanelan'ny zavatra.
Nosintomiko ny kinova fitsapana, ary niezaka ny naka ny sosona data OSM iray manontolo avy ao UTAH aho. Efa 10 minitra teo no nanodinana azy, ny iray naharitra ela indrindra dia ny sosona an-dalambe, saingy satria nangatahiko izy hanaraka ny geocode. Toa zavatra manaitra ahy izany, te-hanao fampiharana hafa aho, satria tamin'ny farany dia nampidina ny fototr'ity fanjakana ity izy, nanao ny fananganana topolojika sy ny fandravana ny topolojia ho an'ny fanovana data ho an'ny shp layer. Miaraka amin'ny fanitsiana VBA namako «filiblue»Nanamboatra fanitsiana mba hisintonana ny tontolon'ny sarintany Open Street rehetra any Bogotá sy ... ho an'i Bombazo namanay!
Araka ny naseho, Avy eto ianao afaka maka download ny sarin'ny Map of Open Street ao Bogotá, eo anelanelan'ny fandrindrana -74.343, 4.536; -73.903,4.813.
Honestly dia mendrika ny antsasak'adiny izay efa nohamasiniko.
Tsotra be io amin'ny famakafakana ny fikarohana voasivana, ho an'ireo karazana fampiharana geomarketing. Ny fahaizan'ilay antsoina hoe 'analizy akaiky' an'ity rindrambaiko ity dia hita fa namboarin'ny orinasa mpanao fotodrafitrasa iray izay manao fanadihadiana momba ny fanamboaran-dàlana mba hamaritana ireo faritra mety hisy fiantraikany. Ny data GPS dia azo ampidirina hanehoana ny mombamomba ny toerana tena misy na hanomezana fampahalalana momba ny fitetezana sy ny fivezivezena avy amin'ilay rindrambaiko.
Ny sarintany ny sarintany dia azo ekena sy azo ampiharina, izay eritreretina hoe inona no tanjona farany hampitana hevitra.
GIS Client tsotra - Desktop GIS Software
Manohana ny angona vector an'ny Shapefiles, Layers Graphic GIS Tsotra, DXF, Simple GIS Server Vector, Layers amin'ny hetsika miaraka amina takelaka ary tahiry rehetra amin'ny alàlan'ny mpampifandray ODBC. Ny fanovana karazana CAD dia tena azo ampiharina, amin'ny baiko iraisana toy ny offset, trim, fillet, split, miaraka amin'ny fahombiazany amin'ny fanampiana na fanesorana volo, esory / averina izay tsy mamono fahatsiarovana, na eo aza ny fanaovan-javatra mavesatra, ny fanohanan'ny cogo amin'ny bearings ary ny halavirana, ary ny fakana haingana Raha fintinina, mahavita manova ampy.
Ny tena nahagaga dia ny famolavolana rakitra fanovana amin'ny maody mpampiasa marobe. Raha heverina fa rakitra arkeozy ity miaraka amin'ny fetran'ny 16 bitany fotsiny, izay tonga taminay ho fenitra de facto ary sarotra be tokoa ny nanala azy taorian'ny 20 taona lasa.
Mikasika ny fanohanan'ny raster dia misy ny BMP, Jpeg, Tiff, Jpeg 2000, MrSid, Simple GIS MRI (sary marobe), ny sarin'ny Server GIS tsotra, WMS ary tato ho ato dia misy WMS tessellated (WMTS)
Ny client GIS tsotra dia mandeha amin'ny Microsoft Windows. Izy io dia manana ny heriny, ny fahazavana ary ny fiasany mba hiasa ho toy ny rindrambaiko rindrambaiko GIS amin'ny birao. Raha te hampiasa azy amin'ny saha na fitetezana ianao dia azo atao amin'ny takelaka manohana ny windows. Izy io dia manao asa mahazatra an'ny sarintany misy lohahevitra, andian-tsafidy, fanivanana, fangatahana habaka sy toetra, fanitsiana sy fijerena ireo rakitra .shp amin'ny maody ho an'ny mpampiasa marobe, nandroso ny asa fanovana, ny famokarana ny sarintany, ny geocoding, ny fivezivezena, sns. Hitako ny fahafaha-misintona andiana iray manontolo Open Data Map Street, ohatra ny firenena iray manontolo ao Etazonia, miaraka amin'ny geocoding amin'ny fanjakana na amin'ny Zipcode.
Azonao atao ny manangana sarintanin'ny lalam-baolina feno sy feno azo ampiasaina amin'ny fampiasana tsindry vitsivitsy. Izy io koa dia ahitana sary maro momba ny fitaovana ahodin-tsindrona izay mahaliana ny vahaolana mahaliana, afaka manova ny rindrambaiko mampiasa Visual Basic for Aplicatons (VBA).
Manome ny vokatra azo avy amin'ny kalitao azo ekena mivantana na azo aseho amin'ny endrika amina grafika iombonana mba hampidirana ao anaty fonosana hafa.
Tsotra GIS Server - rindrambaiko fametahana sarintany GIS
Manoloana ny filana mizara angona GIS amin'ny alàlan'ny tamba-jotra, eo an-toerana, ny fantsom-pifandraisana na Internet, mpizara Microsoft Windows tsotra izay mampiasa TCP / IP ary misy mpizara Web mijoro mamela ny serivisy vector sy / na raster ho an'ny mpanjifa GIS amin'ny tambajotram-pahalalana na manome serivisy fanaovana sarintany tranonkala geospatial (WMS) misokatra. Ny kinova vaovao an'ny Server dia mamela ny sarintany noforonina tao amin'ny client GIS Tsotra ary namoaka azy ireo ho WMS tamin'ny fomba somary tsotra.
Azonao atao ny manolotra angon-drakitra ary manamboatra ny fanamarinana SSL. Azo atao koa ny mampifandray azy amin'ny AVL (Toerana misy ny fiara mandeha ho azy) amin'ny alàlan'ny plugin ho an'ny fifehezana GPS lavitra.
Ho famaranana, ny Simple GIS Software, na dia fitaovana kendrena ho an'ireo mpampiasa amerikana avaratra aza, dia manana potika mahaliana ho vahaolana lafo vidy. Ho an'ny $ 25 dia antenaiko kely kokoa; raha ny fahitako azy dia rindrambaiko manana fahaiza-mizara mpanjifa, manana fahaiza-manao ampy
Ny fotoana no hilaza ny halavitr'io fivoarana io.
Ity no tranonkala GIS Software tsotra. Ho an'ny fampahalalana manokana momba ny Simple GIS Client, tsindrio eto. Raha te hianatra momba Simple GIS Server ianao dia tsindrio eto.
Previous Post«Previous Manana angona LiDAR aho - inona izao?
Next Post Python: ny fiteny izay tokony ho laharam-pahamehanamanaraka »